ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြဖော်ပြချက်: ပလတ်စတစ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ Dimension: 600 * 300 * 200mm သည်းခံစိတ်: +/- 0.05 မီလီမီတာ Surface ကကုသမှု: အဖြူသို့မဟုတ်ထုံးစံလျှောက်လွှာ: လက်အရောင် polishing စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှေးခယျြ? ကျနော်တို့လျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံန်ဆောင်မှုများအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဖြေရှင်းချက်ပူဇော်! Youde လျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အစွမ်းထက်ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်ရှိသည်, CNC စက်စင်တာများ ...
ဖော်ပြချက်: ပလတ်စတစ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ Dimension: * 300 600 * 200mm
အရောင်: အဖြူသို့မဟုတ်ထုံးစံ လျှောက်လွှာ: စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်း
Youde လျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများချီတက်ခဲ့ကြသည်။ We have powerful manufacturing capability, CNC machining centers, 3D Printing, plus auxiliary equipment like milling machine, Sand Blasting Machine, drilling machine etc and the cooperation of our partners, we are able to support every different components of the prototyping
ကျော်သည် 11 နှစ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ QC အဖွဲ့ကဝန်ထမ်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုတည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးကိုအာမခံ။
Well- စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းနှင့် OEM အလို့ငှာများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုပေးအတွေ့အကြုံ။
1. custom CNC စက်ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှု: သင်၏ပုံဆွဲသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံအဆိုအရသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများအမျိုးမျိုး machining Customizeစိတ်တိုင်းကျ
2. စိတ်တိုင်းကျ 3D ပုံနှိပ်န်ဆောင်မှု: ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ SLA နှင့် SLS နှင့်အတူလျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
3. စိတ်တိုင်းကျ Silicon မှိုဖုန်စုပ်ကာစ်: ကျနော်တို့ဆီလီကွန်မှိုလေဟာနယ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်သင်တို့ဆီသို့န်ဆောင်မှုကို run သေးငယ်တဲ့အမိန့်ရုံးတင်စစ်ဆေးဆက်ကပ်။
4. prototype စေသည့်ရှေ့ပြေးပုံစံလုပ်ကွိုဆို
ကျွန်ုပ်တို့၏ Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ capacity
CNC စက်, 3D ပုံနှိပ်ခြင်း (SLA), ဆီလီကွန်မှိုသတ္တုများပုံသွန်း, လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း, Bende စသည်တို့ကို
ကို ABS, PC မှာ, etc PP, PMMA, PE, Pom, PA, ရော်ဘာ, Silicon,
လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်အခြားသောပစ္စည်း: ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း, ကြေး, ကြေးနီ, သံမဏိ။
Manufacturing Size ကို
Size ကို: * 1200 2000 * 1000mm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
စိတ်ကြိုက်ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးသောအင်္ဂါရပ် machining နိုင်ပါတယ်
ဆေးသုတ်, အရောင်, ပိုး-ပုံနှိပ်, anodize, ပွင့်လင်းမျက်နှာပြင်, စမျက်နှာပြင်, ဖြီး, ရော်ဘာရေနံ, electroplate ။
.stp / .pdf / .xt / အဆင့် ./ ။ dwg / .dxf / .igs / .prt / .stl / .sldprt
ကျနော်တို့ DHL / FedEx / UPS စသည်တို့အားဖြင့်ကယ်မနှုတ်ရန်စီစဉ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်နိုင်ပါတယ်။
CNC Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
ပလတ်စတစ် Rapid CNC စက်
ပလတ်စတစ် Rapid CNC စက်ပစ္စည်းစက်ရုံ
Rapid CNC စက်
Rapid CNC စက်စက်ရုံ
အသေးစားငွေပမာဏ CNC Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
Remote Control ကိုအဘို့အ CNC စက်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်ရှေ့ပြေးပုံစံ